That's so good, right?: The New Guy
ကျွန်တော်ကျောင်းကနေ အိမ်အပြန်လမ်းဆီ တည့်တည့်မောင်းလာတာ လေးနာရီနည်းပါးရှိပြီ။ ကားကိုဆက်တိုက်မောင်းလာရတာ တော်တော်ငြီးစီစီနိုင်တာပဲဗျာ နားဖို့နေရာတစ်ခုခုရှာပြီး ခဏအနားယူဦးမှပါ။
ညမှာ ကားရပ်ပြီး နားလို့ရတဲ့ ရပ်နားစခန်းလေးတွေအကြောင်း ကြားဖူးနေတာကြာပြီဗျ။ အခုလဲ တကယ့်ကို ခဏနားဖို့လိုနေပြီလေ။ ဟိုသည်ကြည့်ရင်း ဘယ်နေရာ ဘယ်နားရပ်ရမလဲ အခြေအနေကြည့်လိုက်တော့ နာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့ မနီးမဝေးမှာ တန်ဖိုးကြီးကားတွေစုရပ်ထားပြီး လူတွေတစ်ယောက်မှ မတွေ့ရတဲ့ နေရာတစ်နေရာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အိမ်ပြန်ဖို့နောက်ကျနေပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းကားတွေစုရပ်ထားတာ လူတစ်ယောက်မှမတွေ့ရတာကိုမကြုံဖူးတော့ စူးစမ်းဖို့ မောင်းလာတဲ့ကားကို နေသားတကျဖြစ်အောင်ရပ်တန့်လိုက်တာပေါ့နော်။ ပြီးတော့ မလှမ်းမကမ်းက ထိုင်စရာခုံရှည်အနည်းငယ်နှင့် သန့်စင်ခန်းတွေရှိနေတဲ့ အဆောက်အဦးကြီးတစ်ခုရဲ့ Lobby ထဲ ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ဝင်သွားလိုက်တယ်။ အမျိုးသားသန့်စင်ခန်းဆီ ကျွန်တော်အရောက် လူတစ်ယောက် အ၀င်ပေါက်မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ဟိုသည်ကြည့်နေတာကို သတိပြုမိခဲ့ပါရဲ့။ ဒီလူကြည့်ရတာ အသက် ၄၀လောက်ရှိပြီး ကိုယ်ခန္ဓာပုံပန်းက ကြည့်ကောင်းသား။ အဲ့လူနားကို ကျွန်တော်လျှောက်သွားလိုက်တော့ သူက “မင်းက လူသစ်ပေါ့” တဲ့မေးတယ်။
ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုဘာပြောရမလဲ ယောင်ရမ်းပြီးတော့ “ဟုတ်၊ ကျွန်တော်က လူသစ်ပါ” လို့ဖြေလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် နည်းနည်းကြောက်စိတ်ဝင်မိပေမယ့် အတွင်းခန်းထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိလိုစိတ်က စွန့်စားစေပါရဲ့။
ကျွန်တော် လျှောက်လှမ်းပြီး ၀င်အသွားမြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် ရှော့ခ်ဝင်သွားရပါတယ်။ သန့်စင်ခန်းတွေရဲ့နောက်ဖက် အ၀တ်လဲခန်းလို ကျယ်လှတဲ့ ရေချိုးခန်းတစ်ခုကိုနောက်ခံအဖြစ်အရင်မြင်ရတယ်ပေါ့။ အ၀တ်မပါ လူ ၈ယောက်လောက်က ကျွန်တော် မမမြင်ရတဲ့အရာ တစ်စုံတစရာကို ၀ိုင်းကြည့်နေကြတယ်ဗျ။ ဒီငနဲတွေက အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပဲ ၂၀နှစ်ကနေ ၄၀နှစ်ဝန်းကျင်လောက် ရှိကြမယ်။ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုမြင်သွားတယ်။
“ဟေး….လူသစ်လာပြီ၊ ငါ့ကောင် ဒီကိုလာခဲ့” သူက ကျွန်တော့်ဆီ လှမ်းလာရင်း သူ့လူတွေကို တစ်ပြိုင်တည်းအသိပေးလိုက်တယ်။
ကျွန်တော် သူတို့အုပ်စုနဲ့ ပူးပေါင်းလိုက်တယ်။ ငနဲတွေ ၀ိုင်းပြီးကြည့်နေတဲ့ကိစ္စကို ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတော့ ဒုတိယအကြိမ် ရှော့ခ်ဝင်ရပြန်ရော။ အသက် ၁၉နှစ်၊ ကျွန်တော့်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက် ကြမ်းပြင်ပေါ်လေးဘက်ထောက်နေတာကို ငနဲ တစ်ပွေက နောက်ကနေ အားရပါးရ -ိုးနေသလို နောက်တစ်ယောက်ကလည်း အဲ့ကောင်လေးရဲ့ လည်မျိုထဲထိရောက်မလားမသိ နှုတ်ခမ်းလွှာတွေကတစ်ဆင့် ထည့်သွင်းနေတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံတွေဆက်တိုက် မြည်ဟည်းကာ တော်တော့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ် မြင်နေရတာတွေကြောင့်လေ။ ဒီလို တစ်ပွေတည်းကု လူတစ်အုပ်လောက်က ဆော်နေတဲ့ အဲလေ ၀ိုင်းပြီး ဆော်မယ့်မြင်ကွင်းကို အရင်က မြင်မှမမြင်ဖူးခဲ့တာ။ အုပ်စုထဲက တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီး “ဟေး …မင်းဘာကို စောင့်နေတာလဲ ? အ၀တ်တွေချွတ်လေ၊ ဒီတစ်ယောက်ပြီးရင် မင်းအလှည့်”
ဘောင်းဘီကို မြန်မြန်ချွတ် အင်္ကျီကြယ်သီးတွေဖြုတ်တာတောင် အလွဲလွဲအမှားမှားကိုဖြစ်လို့ဗျာ။ ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်အ၀တ်အားလုံးမရှိတော့ တာနဲ့ လှုပ်ရှားဗဟိုပြုနေရာကို ခပ်သွက်သွက်လှမ်းသွားလိုက်တယ်။ ဘဲတစ်ပွေက bot နေနေတဲ့ငနဲလေးကို သောက်ရမ်းဆွဲနေတုန်းပဲ။ အဲဒီအချိန် သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က လူသစ်ကိုဦးစားပေးလိုက်ရအောင်လို့ တိုးတိုးပြောနေတာကို မသိမသာကြားလိုက်ရပါတယ်။
OMG!! -င်ချနေတဲ့ငနဲက bot ကောင်လေးရဲ့ ခရေ၀ထဲက သူ့ငပဲကိုဆွဲထိုက်လိုက်တာ ရှည်လမျောကြီး။ ကောင်လေး ပါးစပ်ထဲကနေ သွင်းထားတဲ့ ငပဲကိုဆွဲထုတ်တဲ့ ငနဲပစ္စည်းကလည်း ‘ဂလု’ တံတွေးနင်လောက်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် ကောင်လေး ဘေးက ကြမ်းပြင် ပေါ်အသာလှဲကာ တွေ့ရတဲ့ချောဆီဘူးကိုယူ ကျွန်တော့်ခရေ၀မှာခပ်ရွှဲရွှဲ၊ ပြီးတော့ ငပဲမှာ နည်းနည်းလိမ်းကျံပွတ်သပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။
“ ကျွန်တော့်နာမည် သီဟ၊ ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ်ပဲဗျာ” ကျွန်တော့ဘေးနားကပ်လာတဲ့ အတောင့်စင်လေးကို ပြောလိုက်တယ်။
“ငါ့နာမည်က ကျော်စွာ၊ ငါလည်း အခုမှစတာ” ပါးချိုင့်တွေပေါ်အောင်ပြုံးရင်း ကျွန်တော့်ကိုပြန်ပြောတယ်ဗျ။ “ကဲ….ငါ့ -င်ထဲကို မင်း-ီးနဲ့ ဖြည့်လိုက်တော့ကွာ…သိပ်တော့မကြမ်းနဲ့”
ဘေးတစ်ဖက်ကို ခပ်စောင်းစောင်းလှည့်ပေးလိုက်တဲ့ ကျော်စွာရဲ့ နောက်ကျောဘက်ကနေ အသာနေရာဝင်ယူ ကျွန်တော့်ငပဲမှာ condom အကောင်းစားလေးစွပ်လိုက်ရင်း သူ့ခရေ၀ကိုအသာတေ့သွင်းလိုက်ပါတယ်။ Lube ကရွှဲနေတော့ ဟိုသည်ချော်နေ သေးတာကြောင့် ကျော်စွာက ကျွန်တော့်ငပဲကို ဆွဲကိုင်ကာ သူ့အပေါက်ဝမှာလမ်းကြောင်းတည့်ပေးရပါရဲ့။ “အာ….အာ” ဘယ်လိုပြောရ မလဲမသိဘူးဗျာ လိင်တူအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ ခရေ၀ထဲကို မြှုပ်သွားတဲ့အထိ ငပဲကိုဖိသွင်းလိုက်ရတဲ့အရသာကိုလေ။ အဦးဆုံးလည်း ဖြစ် ခံစားချက်ကလည်း တကယ့်လေဟာနယ်ထဲပြိုဆင်းသွားတာ။ ကျွန်တော် တကယ့်ဖွဖွလေး အထုတ်အသွင်းစလုပ်ကြည့်တယ် သူ့ ခရေ၀က တင်းပြီးကြပ်နေတော့လေ။ ကျွန်တော့်ငပဲရဲ့ အထုတ်အသွင်းစံချိန်က တဖြည်းဖြည်းမြန်လာတော့ ဘေးက ၀ိုင်းကြည့်နေတဲ့ ငနဲတွေက “ဟေး…လုပ်ထား”ဆိုတာမျိုး ဘောလုံးပွဲကို အားပေးကြည့်ရှုနေသလိုကို မြှောက်ပေးကြတယ်။
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမှာ ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြာရှည်ထိန်းနိုင်မှာလဲ။ “ကျွန်တော်….ကျွန်တော် ပြီး….ထွက် တော့မယ်” လို့ပြောပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက် ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ခရေ၀ထဲက လျောကနဲဆွဲထုတ် comdom ကိုဆွဲချွတ်ကာ ကျော်စွာရဲ့ ပါးပြင်ပေါ်ကို ပူနွေးနေတဲ့ မလိုင်ဖတ်တွေကို ဆမ်းလိုက်တယ်။ အများကြီး အားရပါးရ..။
“ဟေ့ ကောင်လေး ထိုင်မနေနဲ့ အဲဒါကိုစားလေ” ကျွန်တော့်ကို ငနဲတစ်ပွေက လှမ်းအော်ပြောတယ်ဗျ။ နှိုးဆော်တာဖြစ်မှာပေါ့။
ဒီတော့ ကျွန်တော် ကျော်စွာ့ တင်ပါးတွေကို တရွှတ်အနမ်းပေး၊ ပြီးတော့ သူ့ပါးပြင်ပေါ်က စီးကျလာတာတွေကို ကျွန်တော် လျှာနဲ့ ပြန်လျက်ပစ်ပါတယ် သန့်စင်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်။ ကျွန်တော်နှင့် ကျော်စွာမတ်တပ်ရပ်ကြတယ်။ ကျော်စွာက ကျွန်တော့်ကို နံရံဘက်မျက်နှာမူစေကာ သူကနောက်ကနေဖက်ရင်း နံရံရှိရာကို ကပ်စေတယ်ဗျ။ နံရံပေါ်က တဘက်တင်ဖို့လုပ်ထားတဲ့ သံလက်ရန်း တွေကို ဆွဲကိုင်လိုက်ရင်း ဘာတွေရှေ့ဆက်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကို မှန်းဆမိပါရဲ့။ ကျော်စွာက ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းအထက်နားက ရေပန်းခေါင်းကို လှည့်လိုက်တော့ ရေမွှားတွေက နှစ်ဦးသားကိုယ်တွေပေါ် ဖြာဆင်းကျလာကြတယ်။ ကျော်စွာရဲ့ လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို ပွတ်သပ်သလို ခရေ၀ကိုလည်း လက်ချောင်းတွေနှင့် ဖိသွင်းကစားသေးတာပါ။
“အ..အ” ကျော်စွာက သူ့ငပဲကို condom အပါးစားတစ်ခုစွပ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက် သူ့ငပဲခေါင်းကို ကျွန်တော့်ခရေ၀မှာ သွေးတိုးစမ်း တော့တာပါပဲ။ကျွန်တော် အသက်ကိုပါးစပ်ဟပြီး အငမ်းမရရှူရှိုက်မိပါတယ်။ ကျော်စွာရဲ့ ရှည်လျားလှသော ငပဲဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အပျိုစင်ခရေ၀ထဲကို မဆုံးနိုင်တွင်းအောင်းတော့တာကိုး။ နည်းနည်းနာတာကြောင့် ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားကနေ အသံထွက် အော်ညည်း မိပါတယ်။ ရှိသမျှငနဲတွေက ၀ိုင်းဝန်းလာပြီး ကျော်စွာ့လုပ်ရပ်ကို ကောင်းချီးပေးကြရော။
”သူက အပျိုစစ်လေးပဲကွ ဟားဟား” အုပ်စုထဲက ငနဲတစ်ပွေက ကျွန်တော့်အဖြစ်ကို သတိထားမိရင်း ရယ်မောပြောဆိုပါတော့တယ်။
မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ ကျော်စွာတစ်ယောက် ကျွန်တော့်အပေါ် သနားညှာတာမှုမရှိတော့ဘဲ တရစပ်ဆောင့်သွင်း တာဗျာ..အ။ ကျွန်တော်သည်လည်း နာကျင်မှုရဲ့အလွန် နည်းနည်းလွတ်စပြုလာကာ ထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်တွေရရှိ သာယာလာတာ ပေါ့နော်။ အိုး…ငနဲတွေရဲ့ အားပေးအားမြှောက်ပြုသံ၊ ရယ်မောသံ၊ သူတို့ငပဲတွေကို မာတာကျမသွားအောင်လက်ကစား နေတဲ့အသံ တွေအားလုံး ကျွန်တော်ကြားနေရပါတယ်။ နောက်တော့ ကျော်စွာ ပါးစပ်က အားရပါးရ ၀မ်းခေါင်းသံပါအောင် အော်ညည်းလိုက်ရင်း သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲဖိကာ ဖိကာဖြင့် ကိစ္စအဆုံးသတ်ပါသတဲ့။ ခဏတာငြိမ်နေပြီးမှ ကျော်စွာက သူ့ငပဲကို ငြင်သာစွာ ဆွဲထုတ်ပါတယ်။ “ငါတို့ မပြီးသေးဘူးနော် ကောင်လေး” လို့ဘေးက ငနဲတစ်ပေကကြေငြာတယ်ဗျ။
ကျော်စွာ့နံဘေးကို ရို့တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် အဲ့ဒီလူက ကျော်စွာ့နေရာဝင်ယူကာ မာတောင့်နေတဲ့ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ ချောဆီ ရွှဲနေတဲ့ condom နဲ့အတူထိုးသွင်းပါတော့တယ်။ ဒီလူကြီးက အသက် ၄၀လောက်ရှိတယ်။ ကြမ်းတမ်းပြီး ညှာတာမှုမရှိ မြန်နိုင်သမျှ အရှိန်နှုန်းနှင့် ကျွန်တော့်ကို -ိုးတော့တာ။ သူ့ရွှေဥတွေက ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံကိုတောင် စည်းချက်လိုက်တဲ့အတိုင်း ရိုက်ခတ်လို့။ ကျွန်တော့်မှာ အံကြိတ်ပြီး အ၀တ်တန်းတွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားတာမှာ ခပ်ထွားထွားနောက်ဘဲတစ်ပွေက လှမ်းလာပြီး ကျွန်တော့်ကို သူ့ငပဲအားကိုင်တွယ်စေ၊ နောက်တော့ ကုန်းပြီး ပါးစပ်အာခံတွင်းထဲထိ ထည့်သွင်းစုပ်မျိုစေပါရော။ရှေ့ကငနဲနဲ့ နောက်က ငနဲနေရာ ပြောင်းပြီး ကျွန်တော့်ကို သောင်းကြမ်းကြသေးတာ။ တခြားလူအချို့က ကျော်စွာ့ကိုလည်း အလွတ်မပေးကြဘူးဗျ အတော်ကဲကြတာပဲ။ လူအုပ်ထဲက ငနဲတစ်ပွေက ပတ်ချာလည်ဝိုင်းဝန်းနေကာ သူတို့ငပဲ သူတို့ထုထောင်းသတ်နေကြသူတွေကို “ဟေး… လူသစ်ကို ၀ိုင်း အားပေးဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ” လို့ဆော်သြလိုက်တယ်။ လူတစ်စုလုံးက ဟေးဟေးဟားဟားနှင့် တက်ကြွလာကြပြီး ကျွန်တော့်ကိုမချီကာ အခန်းအလယ်မှာထိုင်ချစေပြီး ချဉ်းကပ်လာကြတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းဖြစ်သွားချိန်မှ ငပဲတော်တော်ကြီးကို တုတ်တဲ့ ငနဲက ကျွန်တော့်နားတိုးကပ်လာကာ ကျွန်တော့်မျက်နှာပေါ် ပူနွေးပျစ်ချွဲတဲ့ သူ့သုက်ရည်တွေကိုဖျန်းပက်ပါရော။ ကျွန်တော်…ကျွန်တော် အခုမှပဲ ဘာတွေဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုတာ သတိကပ်မိတယ်။ တစ်ယောက်ခြင်း တစ်ယောက်စီတိုင်း သူတို့စိတ်ဆန္ဒရဲ့အမြင့်ဆုံးကိစ္စ သုက်ရည်ဖြူတွေကို လာလာပြီးဖြန်းပေးကြတာ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးဖုံးအုပ်သွားခဲ့ ပါလေရော။
ကျွန်တော် တကယ့်ကို အသိအမှတ်ပြုရပါရဲ့ ဒီလိုခံစားပြုလုပ်ရတာကို တော်တော့ကို နှစ်သက်သဘောကျသွားခဲ့တယ်ဆိုတာ။ ပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ ငနဲတွေရဲ့မျက်နှာတွေကို ခိုးပြီးမှတ်နေတုန်း ၀တ်စုံပြည့်နှင့် လူငယ်လေးတစ်ယောက် ကျွန်တော်တို့ဆီ လျှောက်လာတာကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။
“မင်းက ဘယ်သူလဲ” ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တူတဲ့ငနဲက လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးမေးတယ်။
“ကျွန်တော်က လူသစ်လေ” သူက အဖြေပေးတော့ “ဒါဆို…..မင်းကရော ဘယ်သူလဲ?” လူတွေအားလုံး ကျွန်တော့်ကိုဝိုင်းကြည့်ပြီး မေးကြရော…ဟိ။
ကျွန်တော် ကျွန်တော်…..ဘာအဖြေမှမပေး သွားစွယ်လေးတွေဖွေးကနဲပေါ်အောင် ပြုံးပြလိုက်သည်ပေါ့နော်….။
Alex Aung ( 14 May 2013)
Posted by Alex Aung at 5:51 AM
My god he is hot!!!
Fucked My Bitch Brother – In – Law
My First Sex In A Men's Public Restroom: Part 1